အသစ်နှစ်ဆယ် LEGO CITY ဝယ်ယူရန်ယခုရရှိနိုင် 2021 အစုံ
01 / 01 / 2021 31 / 12 / 2020 အာဒံ Basch 1142 Views စာ0မှတ်ချက် 60285 အားကစားကား, 60286 သဲသောင်ပြင်ကယ်ဆယ်ရေး ATV, 60287 ထွန်စက်, 60289 Airshow ဂျက် Transporter, 60290 စကိတ်စီးခြင်းပန်းခြံ, 60291 မိသားစုအိမ်, 60292 မြို့စင်တာ, 60304 လမ်းမကြီးပြား, 60305 ကားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, 60306 စျေးဝယ်လမ်း, City, Lego
အသစ်၏ကြီးမားသောဌန် Lego CITY အစုံကနေဝယ်ယူရန်ယခုရရှိနိုင်ပါသည် LEGO.com.
လန်းဆန်းစေသောအရှိန်အဟုန်ပြောင်းလဲခြင်း၌ဤလှိုင်းသစ်သည်အရပ်သားဘဝကို ပို၍ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားစေသည်။ နိုင်ငံသား Lego CITY နှစ်သစ်ကူးအပန်းဖြေလှုပ်ရှားမှုများနှင့်အတူနှစ်သစ်ကူးကျင်းပနိုင်သည်။ 60290 စကိတ်စီးခြင်းပန်းခြံ ၏လူငယ်တစ်နေရာရာမှာပေးထားပါတယ် Lego CITY ထွက်ဆွဲထားရန် 60292 မြို့စင်တာ နှင့် 60306 စျေးဝယ်လမ်း လက်လီနှင့်အပန်းဖြေစခန်းများစွာကိုထောက်ပံ့ပေးသည် Lego CITY အပြင်မထွက်ခိုင်းခြင်း)။
လှိုင်းသစ်တွင်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်သောနေရာ၌ပါဝင်သည် Lego နိုင်ငံသားများသည်ရှည်လျားသောစကိတ်စီးခြင်းနှင့်ဈေးဝယ်ခြင်းများပြုလုပ်ပြီးနောက်အိမ်သို့ပြန်လာကြမည်။ 60291 Modern Family House သည်အကွာအဝေး၏တကယ့်မီးမောင်းထိုးပြမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ လျှပ်စစ်မော်တော်ယာဉ်အားသွင်းသည့်အနေနှင့်ကဲ့သို့သောထူးခြားဆန်းကြယ်သောအင်္ဂါရပ်များဖြင့်၎င်း၏ခေတ်သစ်အမည်နှင့်အညီနေထိုင်သည်။ အစုံ၏အစောပိုင်းပြန်လည်သုံးသပ်ပေးပါသည် အများကြီးပိုနီးကပ်စွာကြည့်.
အသစ်နှင့်အတူပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်သကဲ့သို့ Lego CITY လှိုင်းတံပိုးလည်းအရေးပေါ်ဝန်ဆောင်မှုများမှမြှုပ်နှံအများအပြားအစုံရှိပါတယ်။ အောက်ပါလင့်ခ်များမှတစ်ဆင့်အကွာအဝေးအပြည့်အစုံကိုသင်စစ်ဆေးနိုင်သည်။
Lego CITY အသစ်သောဇန်နဝါရီလ 1 ဖြန့်ချိအတူတစ်ခုတည်းသောဆောင်ပုဒ်မဟုတ်ပါဘူး။ အားလုံးဖြတ်ပြီးအသစ်ကဘာလဲဆိုတာကြည့်ဖို့ Lego ခေါင်းစဉ်များ, ငါတို့ကျော်ခေါင်း အသစ်ထုတ်လုပ်မှု၏မာစတာစာရင်း.